Shiinaha silikoon silsilad o-ring warshad iyo Warshad | Jujie
shaabad silikoon ah o-giraan
my – 73
madow, caddaan, casaan, cagaar, iwm
heer iyo heer aan caadi ahayn
-40 ° C - 200 ° C (caadi ah)
albaabada iyo Windows, mashiinada, kuwa kale
Faa'iidooyinka wax soo saarka
Faa'iidooyinka badeecada: 1. gloss dusha wanaagsan.
2. adkeysi fiican.
4. Kuleylka, heerkulka sare.
5. Tiknoolajiyaddu waa mid qaan gaar ah, oo deggan.
6. Waxaa loo habeyn karaa qaybo aan caadi ahayn.
7. Qiyaasta saxda ah.
Shayga Tijaabada Cutub Habka roobabka silica jel
Adkaanta Xeebta A 70 50
Awoodda siligga Mpa 7.6 7.6
Dheeraynta % 280 430
Awoodda Ilmada KN / M 22.7 21.6
Khadka Tooska ah % 6 6
Hordhaca silikoon silsilad
100% Qalabka Silicone
Xeebta Durometer A 30shoreA-80shoreA
Darajada Cabbirka Ballaca Waa la habeyn karaa
Iska caabinta heerkulka
-60 ° C - 280 ° C (gaar ah)
Dhumucda Darbiga tuubbadu waa xitaa
dusha siman, dildilaac la'aan,
ma xumbo hawo, wasakh la'aan,
ur lahayn oo aan sun ahayn.
Jiangyin Jujie Rubber & Plastic Co., Ltd, oo la aasaasay 2007, waa shirkad hal abuur leh oo ku takhasustay soosaarka iyo horumarinta silikoon alaabta. Waxaan inta badan soo saarnaa tuubbooyin silikoon oo tayo sare leh, silsilado silsilado silsilad ah iyo walxaha isku xidha korantada, elektarooniga, laydhka, dawooyinka, cuntada, kiimikada, baabuurta, dhisida markabka, iyo warshadaha mashiinada.
Halkan waxaa ku yaal alaabooyin kala duwan oo shirkadeena ah, sida goomaatada silikooniga ah, fibre-gaaska tuubada xargaha, silsiladda silikoonka, tubbada silikoon, caag silikoon xumbo lehisku dhejis ah
cajalad silikoon ah, iwm.
Waxaad gujin kartaa sawirada hoose si aad waxbadan uga barato.
Silicone o-ring iyo gogosha silikoonka
Hore: goomayaal fidsan oo wareegsan
Xiga: silsilado iskood isku-dhejisan oo isku-duuban oo duub duuban
cajalado silsilad caado ah oo xirmooyinka gashan
kululeeyaha & silsiladaha caagga ah ee silikoonka u adkaysta
giraan silikoon ah oo loogu talagalay kululeeyaha biyaha qoraxda
naqshad cusub oo silikoon ah oo gogosha albaabka caag ah
kululeeyaha band silikoon dabacsan la heatin cable ...
qaybaha auto silikoon o giraan loogu talagalay daboolida farsamada